စကစကို ဖွိုခှငျးဖို့ NUG အစိုးရ တောငျပံဖွနျ့လာပွီ - Han Nyein Oo
စကစကို ဖွိုခှငျးဖို့ NUG အစိုးရ တောငျပံဖွနျ့လာပွီ
အမစေုပွောတဲ့စကားအတိုငျးပွောရရငျ…အာဏာကိုလိုခငျြလို့ ကမြကိုဖမျးတယျ၊အာဏာက ကမြလကျထဲမှာ မဟုတျဘူး..ပွညျသူတှရေဲ့လကျထဲမှာ၊ပွညျသူထံတောငျးလို့ရရငျယူပေါ့တဲ့ လုံးဝရှငျးတယျ…အာဏာလညျးလိုခငျြတယျ.လုပျလညျးမလုပျတတျဘူး။
လုပျလိုကျရငျလညျး ဖငျက ဖုံးလို့ဂေါငျးကပျေါဖွဈနကွေပွီ။
သူတို့ရှတေဲ့အကှကျကို ကနြျောဉာဏျမီသလောကျပွောရရငျ….ဦးကြျောမိုးထှနျးကို မလုပျကွံမီ…မအလ က ဖှတျပါတီဟာ.သူတို့နှငျ့ မသကျဆိုငျတော့ကွောငျးစာထှကျလာတယျ။အခု ဦးကြျောမိုးထှနျးကိုလုပျကွံတဲ့သူမိပွနျတော့ ဖှတျပါတီ က သူတို့ပါတီကမဟုတျကွောငျးငွငျးလာတယျ…ဆိုတော့..ဘယျသူခိုငျးတာဖွဈနိူငျမလဲ?
နောကျတခကျြက အာစီယံမှာ သူတို့လိုခငျြတဲ့ကိုယျစားလညျ က ထိုငျးဝနျကွီး..တကယျဖွဈလာတော့..ဘရူနိူငျးဝနျကွီး…အဲဒီမှာ စဉျးစားရမှာက ဘာပွု လို့ထိုငျးဝနျကွီး ကို လိုခငျြတာလဲ?အခုလုပျကွံမှု့မှာ အဓိက ပါဝငျနတောက ထိုငျးက လကျနှကျကုနျသညျဖွဈနတေယျ။
ဒါပမေယျ့ဘာဖွဈဖွဈပါ…တို့တှကေ ဓမ်မလမျးအတိုငျးသှားနတေဲ့သူတှလေေ..အကုသိုလျအကြိုးပေးခြိနျရောကျပွီဆိုရငျ.ဘာလုပျလုပျ အဆငျမပွတေော့ဘူး။ဦးကြျောမိုးထှနျးကိုလုပျကွံတဲ့ဖွဈရပျက အကွီးကွီးဖွဈသှားပွီနျော…
အကယျ၍ မအလ လုပျခဲ့ပါမူ မွနျမာစဈတပျသညျကွီးလေးသော နိုငျငံတကာရာဇဝတျဥပဒကေိုပွောငျပွောငျတငျးတငျးခြိုးဖောကျလိုကျတာဖွဈသညျဟု အမရေိကနျအကွီးတနျးရဲအရာရှိခြုပျကွီး မစ်စတာလူးဝှဈအယျဒီဆငျမှထုတျပွနျသတိပေးလိုကျပွီနျော….
UN တို့ US တို့က ပွညျသူဖကျကနေ(၁၀၀%)ပွညျ့ရပျတညျသှားပွီ။နှား ၂ကောငျက လှဲရငျတဈကမ်ဘာလုံး ကို့ယျ့ဖကျမှာ။ဒီအခြိနျမှာ..NUG.အကှကျတှကေ ထိမိတယျ၊လှတယျ၊ကမ်ဘာကလကျခံလာတယျ..NUG ကထီရောငျးတာအကွောငျးမဲ့မဟုတျဘူးနျော..ပွညျသူတှသေူတို့ဖကျမှာ ဘယျလောကျ ရှိနေ တယျဆိုတာကို ကမ်ဘာကွီးကို ပွလိုကျတာ။မအလ ကိုပျေါတငျနှိပျကှတျလိုကျထာ။
စကစကို ဖြိုခွင်းဖို့ တောင်ပံဖြန့်လာပြီဖြစ်တဲ့ NUG အစိုးရ
အမေစုပြောတဲ့စကားအတိုင်းပြောရရင်…အာဏာကိုလိုချင်လို့ ကျမကိုဖမ်းတယ်၊အာဏာက ကျမလက်ထဲမှာ မဟုတ်ဘူး..ပြည်သူတွေရဲ့လက်ထဲမှာ၊ပြည်သူထံတောင်းလို့ရရင်ယူပေါ့တဲ့ လုံးဝရှင်းတယ်…အာဏာလည်းလိုချင်တယ်.လုပ်လည်းမလုပ်တတ်ဘူး။
လုပ်လိုက်ရင်လည်း ဖင်က ဖုံးလို့ဂေါင်းကပေါ်ဖြစ်နေကြပြီ။
သူတို့ရွေ့တဲ့အကွက်ကို ကျနော်ဉာဏ်မီသလောက်ပြောရရင်….ဦးကျော်မိုးထွန်းကို မလုပ်ကြံမီ…မအလ က ဖွတ်ပါတီဟာ.သူတို့နှင့် မသက်ဆိုင်တော့ကြောင်းစာထွက်လာတယ်။အခု ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုလုပ်ကြံတဲ့သူမိပြန်တော့ ဖွတ်ပါတီ က သူတို့ပါတီကမဟုတ်ကြောင်းငြင်းလာတယ်…ဆိုတော့..ဘယ်သူခိုင်းတာဖြစ်နိူင်မလဲ?
နောက်တချက်က အာစီယံမှာ သူတို့လိုချင်တဲ့ကိုယ်စားလည် က ထိုင်းဝန်ကြီး..တကယ်ဖြစ်လာတော့..ဘရူနိူင်းဝန်ကြီး…အဲဒီမှာ စဉ်းစားရမှာက ဘာပြု လို့ထိုင်းဝန်ကြီး ကို လိုချင်တာလဲ?
အခုလုပ်ကြံမှု့မှာ အဓိက ပါဝင်နေတာက ထိုင်းက လက်နှက်ကုန်သည်ဖြစ်နေတယ်။
ဒါပေမယ့်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါ…တို့တွေက ဓမ္မလမ်းအတိုင်းသွားနေတဲ့သူတွေလေ..အကုသိုလ်အကျိုးပေးချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်.ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေတော့ဘူး။ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုလုပ်ကြံတဲ့ဖြစ်ရပ်က အကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီနော်…
အကယ်၍ မအလ လုပ်ခဲ့ပါမူ
မြန်မာစစ်တပ်သည်ကြီးလေးသော နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ဥပဒေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်သည်ဟု အမေရိကန်အကြီးတန်းရဲအရာရှိချုပ်ကြီး မစ္စတာလူးဝှစ်အယ်ဒီဆင်မှထုတ်ပြန်သတိပေးလိုက်ပြီနော်….
UN တို့ US တို့က ပြည်သူဖက်ကနေ(၁၀၀%)ပြည့်ရပ်တည်သွားပြီ။နွား ၂ကောင်က လွဲရင်တစ်ကမ္ဘာလုံး ကို့ယ့်ဖက်မှာ။ဒီအချိန်မှာ..NUG.အကွက်တွေက ထိမိတယ်၊လှတယ်၊ကမ္ဘာကလက်ခံလာတယ်..NUG ကထီရောင်းတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးနော်..ပြည်သူတွေသူတို့ဖက်မှာ ဘယ်လောက် ရှိနေ တယ်ဆိုတာကို ကမ္ဘာကြီးကို ပြလိုက်တာ။မအလ ကိုပေါ်တင်နှိပ်ကွတ်လိုက်ထာ။